Black Magic: Can You Escape Horror v1.2 For Android (35.40 MB)
Can You Escape Horror v1.2 For Android (35.40 MB)
Posted by Black Magic | Posted in Android Games | Posted on 8:27 PM
ဒီရက်ပိုင်း စာလိုက်ဖတ်နေတာနဲ့ Post မတင်ဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်..၊ ကဲ..၊ ဒီနေ့တော့ အားလုံးကို နဲနဲလေး အုန်းစားမယ့် ဂိမ်းလေးတင်ပေးမယ်ဗျာ..၊ အရင်တုန်းက v1.15 တင်ပေးဘူးပါတယ်...၊ အခုဟာကတော့ နောက်ဆုံးထွက် Version ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာနော်..၊ ကျွန်တော်လည်း နေ့လည်ကမှ Play Store ထဲဝင်ပြီး လျှောက်ကြည့်ရင်းနဲ့တွေ့လို့တင်ပေးလိုက်တာ....၊ အသေးစိတ်လေ့လာချင်ရင်တော့ Play Store မှာသွားရှိုးလိုက်ဗျာ..၊ Download ဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Google Drive ကဖြစ်ဖြစ် Evozi ကနေ ဖြစ်ဖြစ်ဆွဲလိုက်ဗျာ..၊ အဆင်ပြေပါစေ..၊
In this horror edition, try to break out of each room. You'll have to solve the multiple mini puzzles and find out the hidden objects, and discover different codes. Find out if you can finish all levels in this exciting and fun puzzle game.
- 10 challenging and addictive rooms
- WALKTHROUGH videos for help
- Different themed rooms